बिराट मेडिकल जनरल बिमोचन | Birat Khabar
हाेमपेज > मोफसल > बिराट मेडिकल जनरल बिमोचन
विराट खबर ११ माघ २०७३, मंगलवार मोफसल, समाचार	0
पुर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालयका मेडिकल डिन डा. सिद्धार्थ कोइराला र विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सयुक्त रुपमा पहिलो पटक मेडिकल जरनल बिमोचन गरेका छन् ।
मेडिकल कलेजले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बिराट जरनल अफ हेल्थ साइन्स नामक त्रैमासिक जरनलको बिमोजन गरेको हो । चिकित्सा क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन भएको उपलब्धि तथा विभिन्न रोगहरुको उपचार पद्दतिको बारेमा यस जरनलले जानकारी गराउन उद्धेश्यका साथ मेडिकल कलेजले प्रकाशनमा ल्याएको हो । मेडिकल कलेजको आफना एउटा सपना हुन्छ त्यो सपनालाई पुरा गर्न चिकित्सकहरुको समुहले नै सहयोग गर्दछ तसर्थ आज त्यो टिमले यो जरनल तयार गरेको छ । तयार गर्नलाई मात्र होइन यसलाई त राष्ट्र्रिय तथा अन्तराष्ट्र्रिय सम्म हेर्न लायक बनाउनु चुनौति रहेको छ । तसर्थ संसारले हेर्ने आर्टिकल समाबेश गरी बिस्तारै बढाउने अध्यक्ष डा. कार्कीले बताउनु भयो ।
नेपालमा ६ वटा मेडिकल कलेज मात्र जरनल प्रकासित गरेको छ । विभिन्न नयां तथा अत्याधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोगबाट उपचारको बारेमा जानकारी यस जनरलले गराउने छ । यो जरनल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा रहेको प्रकाशन गरिएको सम्पादन समुहका डा. एसोसियट प्रोफेसर डा. हेम सागर रिमालले बताउनु भयो । यो जरनलको पहिलो संस्करण तयार गर्न करिब सात महिना लागेको हुनाले अन्तरिष्ट्र्रय मापदण्ड अनुसार नै यसलाई प्रकासन ल्याएको डा. रिमालको भनाई छ । चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धि विभिन्न ज्ञान मुलक तथा नविनतम रिसर्च सामग्रीहरु समावेस हुने यस जरनल आगामी दिनमा प्रत्येक चार–चार महिनामा प्रकाशित हुने स्टुडेन्ड अफेयर्स डाइरेक्टर काशीनाथ चुडालले बताउनु भयो । साथै डाईरेक्टर चुडाले जरनलको सफलताको कामना समेत गर्न भयो । बिमोचन कार्याक्रममा डा. सिद्धार्थ कोइराला, ललित कुमार राजबंशी, म्यानेजर प्रबिण क्षेत्री लगायतले आफना कुरा राख्नु भएको थियो ।